जापानमा अगस्ट! टाइफुनमा ध्यान दिनुहोस्! - Best of Japan
"Gozan Okuribi" र क्योटो, जापान = एडोब स्टकमा लालटेन फ्लोटिंग फेस्टिवल
जापानमा जुलाईको जस्तै मौसम पनि एकदम तातो छ। यसका अतिरिक्त टाइफुनहरू प्राय: आक्रमण गर्दछन्। यदि तपाईं अगस्तमा जापान मा यात्रा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं धेरै यात्रा कार्यक्रममा नजानुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा जापानको यात्रा गर्दा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु।
टोक्यो, ओसाका, अगस्तमा होक्काइडो को जानकारी
यो दिमागमा राखौं कि यो तातो हुन सक्छ र आँधी आउन सक्छ
यात्राको निर्णय पछि सकेसम्म चाँडो होटल र रेलहरू बुक गर्नुहोस्
यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्।
गर्मी मा जापान यात्रा गर्दा उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र को जस्तै जलवायु को बारे मा पर्याप्त सावधान हुन आवश्यक छ। मैले जुलाईको बारेमा लेखमा यस बुँदाको सारांश दिएँ। त्यसो भए, यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया लेख पनि पढ्नुहोस्।
जुलाई लेखमा प्रस्तुत गरिएका बुँदाहरू निम्न दुई छन्।
सर्वप्रथम, दिनको अधिकतम तापक्रम प्राय: ex 35 डिग्री भन्दा बढि हुन्छ, त्यसैले तातो स्ट्रोकबाट जोगिन बारम्बार पानी पिउनु महत्त्वपूर्ण छ। उहि समयमा, किनकि वातानुकूलकले भवनको भित्री भागमा राम्रोसँग काम गर्दछ, त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं कार्डिगन ल्याउनुहोस् ताकि शरीर चिसो नहोस्।
दोस्रो कुरा, टाइफुन प्रायः जापानमा आक्रमण गर्दछ। त्यसकारण, जापान जानु भन्दा पहिले मौसमको पूर्वानुमानको बारेमा सावधान हुनुहोस्। यदि एक टाइफुन जापानमा आइपुगेको छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले यात्राको यात्रा आवश्यक अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्दछ।
मैले माथि लेखें। अगस्टमा, यी थप बाहेक, ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पनि छ।
यदि तपाईं अगस्तमा जापानमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईंले सकेसम्म मध्य अगस्टबाट टाढा रहनुहोस्।
अगस्त १ August देखि १th सम्म, धेरै मानिसहरू जापानमा कामबाट अनुपस्थित छन्। त्यहाँ वार्षिक कार्यक्रम "ओबोन" छ। जापानीहरू यस पटक आफ्ना पुर्खाहरूको चिहानहरू भ्रमण गर्छन्। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् ठूला शहरहरूबाट अगष्टको बीचमा उनीहरूको गाउँमा फर्केका। यस समयमा करिब एक हप्ता कामबाट अनुपस्थित र दर्शनीय स्थलहरूको लागि यात्रा गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि धेरै अनगिन्ती छन्।
यी परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा, अगस्टको मध्यमा होटेलको दरहरू डबल वा सामान्य भन्दा बढि कुरा हो। यस समयमा लोकप्रिय होटेलहरूको आरक्षण एकदम गाह्रो छ। यस कारणका लागि, अगस्टको बीचमा जापानको यात्रा गर्नु राम्रो विचार होईन। यदि सम्भव छ भने, म दृढताका साथ अर्को समयमा यात्रा गर्न सिफारिस गर्दछु।
मध्य अगिमा = AdobeStock मा राजमार्ग र रेलको भीड भइरहेको छ
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, अगस्टमा धेरै जापानीहरू कामबाट अनुपस्थित हुन्छन् र ओबोन फेस्टिवलमा भाग लिन्छन्, त्यसैले तपाईंलाई यस अवधिमा यात्रा गर्न गाह्रो हुनेछ। जे होस्, यो सत्य हो कि यो मौलिक जापानी जीवनको झलक पाउनको लागि अवसर हो, किनकि धेरै जापानी मानिसहरू कामबाट अनुपस्थित छन्।
बोन फेस्टिवलको दौरान, धेरै वार्षिक कार्यक्रमहरू जापानभरि नै गरिन्छ। उदाहरणको लागि, क्योटो शहरमा, "गोजान ओकुरीबी" यस पृष्ठको माथि चित्रमा देखाइए अनुसार पुर्खाको आत्मालाई अर्को विश्वमा पठाउन आयोजित हुनेछ। यदि तपाईं क्योटो यस समयमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जापानको रहस्यमय दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं सजीलै देख्न सक्नुहुन्न।
क्योटो एक बेसिन भएकोले, यो गर्मी मा तातो छ। गर्मीमा क्योटोको वरिपरि हिँड्न अत्यधिक सिफारिस गरिएको छैन। यद्यपि जुलाई र अगस्टमा क्योटोको धेरै आकर्षक पक्ष छ। जुलाईमा, प्रसिद्ध Gion महोत्सव एक महिना भन्दा बढी मा आयोजित गरिनेछ। अगस्त १ 16 मा, क्योटोको पाँच पहाडहरूमा ...
यसैले, अगस्टको यात्रा एक अर्थमा एक धेरै चाखलाग्दो पक्ष छ। तपाईंको यात्रालाई सफल बनाउनको लागि, तपाईं सकेसम्म छिटो होटल आरक्षण गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं क्योटोमा होटल बुकि booking नगरी जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई बस्ने ठाउँ हुँदैन र तपाईं भीडको भीडमा पर्दा थकित हुनुहुनेछ। क्योटोमा गर्मी तातो छ।
म तपाईंलाई राम्रो यात्रा बनाउन जतिसक्दो चाँडो तयारी गर्न सिफारिस गर्दछु।